Jennifer Kate Hudson (*12. Septambra 1981 Chicago, Illinois, USA) dia mpihira Amerikana, mpilalao sarimihetsika, tompon-daka amin'ny loka be voninahitraGrammy, Golden GlobeBritanika lokaBAFTAa Oscarho an'ny anjara asan'ny filma. Tamin'ny volana Septambra 2008 dia nanambady mpikomyDavid Otungary tamin'ny volana aogositra 2009 dia teraka ny zanany lahy voalohany, David Daniel Otunga Jr.
Jennifer dia teraka 12. September 1981 tany Chicago, Illinois. Hatramin'ny fahazazany dia nihira ny nofiny izy. Talohan'ny nihaonan'ireo mpihaino marobe izy dia nanao ny faha-7 taonany rehefa nihira ny corps de corps. Whitney Houston, Aretha Franklin, Patty LaBelle sy Céline Dion dia nihevitra fa ny mozika lehibe indrindra.
Niharan'ny herisetra teo amin'ny fiainan'i Jennifer ny loza nitranga tamin'ny fianakavian'i 24. Oct. 2008, raha novonoin'i William Balfour, vadin'i Julie vadiny, ny mpikambana telo tao amin'ny fianakaviany (reny, rahalahy ary zana-drahalahy) tany amin'ny tanàna niaviany tany Chicago.
Tamin'ny volana 2008 dia nirotsaka tamin'ny tambajotra matihanina David Otway, ary tamin'ny volana aogositra tamin'io taona io dia niteraka zazalahy iray nantsoina hoe David Daniel Otunga jr.
Ny vahoaka dia nahatsikaritra ny 2004 ho farany amin'ny andian-dahatsoratra fahatelo ao amin'ny fifaninanam-pirenena SingingAmerican Idol. Na dia heverina ho tian'ny mpilalao mahafinaritra indrindra aza izy dia nahavita ny fahafito.
Tamin'ny volana novambra, nanao sonia fifanarahana tamin'ny Arista Records i 2006. 23. Ny Febroary 2007 dia nanambara fa nahavita ny lalao voalohany tamin'ny alàlan'ny andiany voalohany.
Ny "Spotlight" tokana voalohany dia navoakan'ny 10. Jona 2008. Naka ny toerany tao amin'ny Top 40 Billboard Hot 100 izy ho toy ny #24 tokana ary niditra tao amin'ny takelaka Britanika sy Tiorka Top 20. Ny tokana faharoa, "Raha Tsy Fitiavana Izany", dia nitondra ny #63 tao amin'ny Billboard Hot 100 sy #37 ao amin'ny tabilao Singulier UK UK. Amin'ny voalohany, ny tokana faharoa dia ny "My Heart," saingy tsy nisy ny famonoana an-kerisetra ny havany. Raha namoaka "Pocketbook" ny olon-droa fahatelo, saingy nopotehina ihany koa. Tsy nahomby tamin'ny mpankafy izy na tamin'ny tsikera matihanina. Ny singa fahatelo dia nanjary ilay hira hoe "Giving Myself" (indraindray koa hoe "Manolotra ny Tenako Aminao").
30. Ny septambra 2008 dia namoaka ny lahatsary voalohany nataony tamin'ny lohateninyJennifer Hudson. Amin'izao tontolo izao, nahazo fanehoan-kevitra tsara izy. Ny 2009 739 ihany no namidy tany Etazonia tamin'ny alàlan'ny 000 XNUMX kopia. Ity nomerika ity koa dia nanome ny nomeny telo ho an'ny loka Grammy prestige:
ho an'ny Best Female Singing R & B Performance (Single Spotlight)
ho an'ny mpihira tsara indrindra ao amin'ny Duet - miaraka amin'i Fantasy Barrino (hira "izaho no hany vehivavy")
ho an'ny alika R & B tsara indrindra
Ny loka dia nalaina ho an'ny rakiny R & B tsara indrindra. Anisan'izany ilay hira "All Dressed in Love" - ​​horonam-peo ho an'ny horonantsary "Sex in the City".
Namoaka rakikira vaovao antsoina hoe "I Remember Me" i Jennifer, efa ho telo taona taty aoriana (21, 03, 2011). Ilay rakikira dia nomena aorian'ny nahafantaran'i Jennifer izay nitranga teo amin'ny fiainany. Ny hira dia mifanentana amin'ny lahatsoratr'io mpihira amin'ny feo avo io. Niara-niasa tamin'i Ryan Tedder, mpanoratra io anarana io, Remember Me. Anisan'izany i R. Kelly (izay misy anao), ny Alicia Keys (Anjely, ny olon-drehetra dia mila ny fitiavana, tsy miandry), ny Swizz Beatz (ny olon-drehetra dia mila ny fitiavana), Harrison Rich (tsy misy iray Tiako ianao, nahazo ity aho, na duo avy any Norvezy - Stargate.
7. June 2009 dia nihira ny Lamesa Michael Jackson Jackson.
10. August 2009 dia teraka tamin'ny zanany lahy David Otung Jr., izay ny rainy dia i David Otung vadiny.
Tamin'ny novambra 2005, Jennifer dia natsangana tamin'ny sarimihetsika mozikaDreamgirls. Izy no namorona ny endrik'i Effie White eto. Niaraka tamin'ireo kintana tahaka ny Beyoncé Knowles, Eddie Murphy na Jamie Foxx izy. Ho an'ity andraikitra ity, nahazo ny Oscar ny 2007 ho mpilalao mendrika indrindra.
Tamin'ny volana Desambra 2007 dia nibilaogy amin'ny Sex in Town. Izy dia niasa ho mpanampy an'i Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Hita ao amin'ny sary hafa koa izy io,Ny fiainana an-tsokosoko miafinanaBiby manan-danja. 2012 no nanamarika tantara telo tao anatin'io andiany iohamotipotika. 2015 niseho tamin'ny andian-tantaraFanjakana.